Sida looga dhigo taariikh amarkayaga xusuusnaan amarro gaar ah | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo sameeyo taariikhda amarkeena oo aan xasuusnayn amarrada qaarkood
Dhamaanteen waan ognahay waxa Taariikhda Bash. Marar badan waxaan ubaahanahay sababo (amniga, paranoia, iwm.) In amar gaar ah LAGU keydin taariikhda, taasi waa, iyo tusaale ahaan, waxaan dooneynaa dhamaan amarrada in la badbaadiyo marka laga reebo kuwa la xiriira ssh, habkan haddii qof uu awoodo inuu galo kumbuyuutarkayagu ma awoodi doono inuu ogaado kombiyuutarka aan ku sameyno SSH.
In laga reebo wax kasta oo la xiriira amarka ssh waxaan ku qornaa qadka soo socda .bashrc :
Qaabkan haddii tusaale ahaan aan wax u qabanno sida:
... lama keydin doonin taariikhda 😉
Haddii aan rabno inay ka reebto wax kasta oo la xiriira amarka ls waxaan u qornaa waxyaabaha soo socda:
Xusuusnow faylkaas .bashrc wuxuu leeyahay mudo bilowga magaca, taas oo macnaheedu yahay inay tahay fayl qarsoon oo ku jira gurigeena. Haddii aad rabto, adoo adeegsanaya amarka echo waxaad si toos ah ugu qori kartaa .bashrc adigoon furin, tusaale ahaan aan ka saarno wax kasta oo la xiriira ssh taariikhda:
Hagaag waxaan qabaa inaysan jirin wax intaas ka badan oo lagu daro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Lagu taliyay » Sida loo sameeyo taariikhda amarkeena oo aan xasuusnayn amarrada qaarkood
Tani waxay kudhowaad igu dhiirrigelineysaa inaan furo bog nin oo aan ku dhajiyo boggan, anigoo wax ka qoraya sida loo taxo faylasha qarsoon waa inay gacan weyn ka geystaan.
Qalab xiiso leh. Ereyga ay matasho?
Xiiso u leh the calaamadaha aan lahayn mustaqbalka waan u baahanahay, aad baad u mahadsan tahay.
Runtii waa mid xiiso leh oo faa'iido leh, gaar ahaan kuwa annaga ah ee adduunka ka jira maamulka shabakadda (paranoia waligood wax ma yeelaan).
Ku jawaab Himekisan
Oo waxaa jira qaabka waxqabadka, kaliya ku qor meel ka hor amarka waana taas, lama xasuusan doono.
Wow, marwalba waxaan isticmaalaa taariikhda -c, laakiin ma jiraan wax ka hartay xD, ikhtiyaarkaasi waa mid aad u fudud oo xul ah.
Waxyaabaha bannaan ayaan ii shaqeyn.
Anigana ma ihi, taasi waa sababta aanan ugu dhajin boostada bilowgii beginning
isagoo intaa ku daray:
HISTCONTROL = iska warwareejinta
boosku wuu shaqeeyaa 🙂
Waxyaabaha bannaan ayaa ii shaqeeyay muddo bilo ah oo sidan u qaabeynaya:
HISTIGNORE = '(boos) + (*)' => sidan oo kale: HISTIGNORE = '*'
Gaara Xiiso Leh. In kasta oo aanan u baahnayn xilligan, waxaan jecelahay inaan ogaado inaan haysto bakhaarro dhan oo ah talooyin halkan ku yaal FromLinux.
Lenin Cali dijo
Gaaban, kooban oo waxtar leh! tabaruc aad u fiican.
Jawaab Lenin Ali
Sida loo galiyo xarfaha farta faylasha LibreOffice